पत्रकार महासंघमा राजनीति हाबी - Karobar National Economic Daily
पत्रकार महासंघमा राजनीति हाबी
query_builderAugust 22, 2017 2:19 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility753
पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न भएको मतदान सोमबार सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशन पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र पत्रकारहरूको हकहित र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति निर्माणमा भन्दा पनि नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा केन्द्रीत भएको छ ।
राजनीतिक आस्था र विचारले प्रभाव जमाउँदै गएको आरोप पछिल्लो समयमा महासंघलाई लाग्दै आएको छ । किनकी महासंघको नेतृत्व लिन विभिन्न पार्टी निकट संघसंगठनहरू तालमेल नै गरेर चुनावी मैदानमा होमिने गरेका छन् । सदस्यता विवाद पनि चरमरूपमा देखिन्छ ।
२५ औं महाधिवेशनपनि यो विषयबाट अछुतो रहन सकेन । प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टरलगायतका संगठन आवद्ध गठबन्धनले गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा प्यानल बनाएर चुनाव लडेको छ भने प्रेस चौतारीले पनि अन्य संगठनसँग तालमेल गरेर तीर्थ कोइराला नेतृत्वको प्यानल बनाएर चुनाव लडेको छ ।
महासंघको अधिवेशन चलिरँदा कारोबारले पूर्वअध्यक्षहरूसँग अबको महासंघ कस्तो हुनुपर्ला, के महासंघमा राजनीतिक विचारको प्रभाव बढ्दै गएको हो ? भनेर सोधेको छ । उनीहरूले कारोबारकर्मी तीर्थ बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
पार्टी संगठन हावी हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ
मूलतः पत्रकार महासंघलाई सबैको साझा र छाता संगठन बनाउने प्रयासमा हामी छौं । अघिल्लो निर्वाचनमा जुन खालको गठबन्धन भयो त्यो गठबन्धनले एकलौटी ढंगले महासंघलाई बनाउने प्रवृत्ति देखिएपछि भिन्न वैचारिक आस्थाका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा संगठित गरेर त्यसमा अल्ट्रा लेफ्टिसदेखि अल्ट्रा राइटिससम्मको गठबन्धन हामीले बनाएका छौं ।
यो प्रयासचाहिँ सबैको साझा संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गर्ने हो । महांघमा सदस्यता शुद्धीकरण गर्ने कुरा एकै चरणमा सम्भव छैन । तर, शुद्धीकरणको अभियान नथाल्ने हो भने अब महासंघको औचित्य समाप्त हुन्छ । अहिले १३ हजार भन्दा बढी सदस्य महासंघमा संगठित छन् । करिब ४० प्रतिशतचाहिँ पत्रकारिता नगर्नेहरू यहाँ सदस्य छन् ।
यो स्थितिमा शुद्धीकरण अभियान थाल्नु जरुरी छ । एउटै निर्वाचनबाट त्यो कुरा छिनोफानो हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । अहिले हामीले जुन प्यानल बनाएका छौं, त्यो प्यानलको विजयपछि चाहिँ यो अभियानलाई अघि बढाउन म बाहिर भए पनि सहयोग गर्नेछु ।
महासंघका थुप्रै एजेन्डा छन् । महासंघले कहिल्यै छोड्न नहुने एजेन्डा प्रेस स्वतन्त्रता नै हो । कुनै पनि खालका अधिनायकवादका विरुद्ध, कुनै पनि खालका सत्ता हस्तक्षेपका विरुद्ध र कुनै पनि खालको बाह्य डर, धम्की र त्रासका विरुद्ध प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हामीले सधैँ उठाइरहेको तर हल नभइरहेको कुरा के हो भने श्रमजीवीको अधिकार हो । यसलाई सही ढंगले उठाउनु जरुरी छ ।
अर्कोचाहिँ नेपाली पत्रकारहरूको संख्या अत्यन्त बढ्यो तर दक्ष पत्रकार खोज्दाचाहिँ कुनै पनि मिडिया हाउसले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण महासंघले बनाउनुपर्छ ।
महासंघमा अहिले चाहिनेभन्दा बढी राजनीतीकरण हुँदै आएको छ । हामी पनि राजनीतिको एउटा अंग भएर अघि बढिरहेका छौं । वैचारिक आस्था सबै व्यक्तिको हुन्छ । तर, पार्टी संगठन नै हाबी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्नु जरुरी छ ।
व्यावसायिक मूल्य–मान्यताप्रति कठोर हुनुपर्छ
पूर्वअध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालका सबै पत्रकारको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो र सबै सञ्चारमाध्यमको नेतृत्वदायी संस्था पनि हो । समग्रमा यसले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूको हकहित र व्यावसायिक विकासका मुद्दाहरूको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि नेपालमा संविधानतः प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित छैन । कानुनी र नीतिगत रूपमा पनि यसलाई अझै सुनिश्चित गराउनुपर्ने काम बाँकी छन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु यसको कर्तव्य हो ।
महासंघ नेपालको अगुवा लोकतान्त्रिक र नागरिक अगुवा संस्था पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्याय र अधिकारका पक्षमा भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । नेपाली पत्रकारितालाई अझै बढी निर्भीक, अझै बढी व्यावसायिक बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै कामको यसले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
महासंघलाई हामीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कब्जा गर्ने प्रयासमा बीचमै अप्ठ्यारो र भेदभाव सिर्जना गर्ने तथा पत्रकार महासंघमा आबद्ध हुन चाहने सबै पत्रकारलाई समान व्यवहारका साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति र सोच नेतृत्वमा नहुँदा कहिलेकाहीँ यो समस्या आएको छ ।
त्यो सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारको आस्था र भरोसाको केन्द्र हो । सबै पत्रकारको अधिकारका लागि लड्ने संस्था भएकाले यसमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक चलखेलका आधारमा विभेद गर्ने, सदस्यता लिनबाट वञ्चित गर्ने, शाखा गठनमा प्रतिशोधको भावना राख्ने क्रियाकलाप भएको भए त्यसलाई सुधार्नुपर्छ ।
पत्रकार भनेको एक किसिमले स्वेच्छा र समर्पणले आएको मानिस हो । पत्रकारितामा आएका सबै पत्रकारले महासंघमा आवद्ध हुन पाउनुपर्छ । पत्रकार भनेको निश्चय नै व्यावसायिक मूल्य–मान्यताप्रति कठोर तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले सबै खाले सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यहाँ पूर्णकालीन पत्रकार नभएका पत्रकारहरू पनि यसका सदस्य हुन सक्छन् ।
नेपालमा अहिले पनि दूरदराजमा पूर्णकालीन पत्रकार भएर बाँच्ने अवस्था छैन । कतिपय शिक्षकले पत्रकार भएर काम गर्नुभएको छ । कसैले व्यापार गरेर पनि पत्रकारिता गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई पत्रकार महासंघले सदस्यता दिनुपर्छ । महासंघमा गैरपत्रकारहरूचाहिँ हुनु हुँदैन, पत्रकारिता गर्ने कोही पनि मानिस सदस्यता लिनबाट छुट्नु हुँदैन ।
पत्रकारमा आधारभूत ज्ञानकै कमी छ
पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको व्यावसायिक छाता संगठन हो । यो संस्थाले मुख्य रूपमा पत्रकारिता पेसामा भएका सबैलाई अभिभावकका रूपमा नेतृत्व गर्नुपर्छ । पत्रकारको पेसाको सुरक्षाको कुरा, व्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा तथा सीप अभिवृद्धिको कुरामा सबै किसिमको सुरक्षाका लागि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पत्रकार महासंघ कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । पत्रकारहरू विचारको विविधता भएका छन् । सबैको आ–आफ्ना राजनीतिक विचार छन् । त्यसलाई कार्यकर्ताको लेभलमा होइन । व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई राजनीतिक विचारमा सहानुभूति मात्रै राख्ने गरी महासंघले लैजानुपर्छ ।
किनभने राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका मानिसहरू, पार्टीका भ्रातृसंस्थामा भएका व्यक्तिहरू पनि पत्रकार हुँ भनेर महासंघको सदस्यता लिएर अहिले पनि बसेका छन् । पत्रकार महासंघको सदस्यतामा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यतातर्फ महासंघ अघि बढ्नुपर्छ । पत्रकारिता पेसामा क्रियाशील रूपमा लागिरहेका मानिसहरूलाई महासंघको सदस्य बनाउनुपर्छ । अहिले धेरै पत्रकार बाहिर छन् । किन बाहिर छन् भने वैचारिक संगठनहरूको प्रभाव र दबाब बढ्दै गएको छ । त्यही कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई यहाँ बस्न असजिलो भइरहेको छ । यो अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो । यसलाई महासंघले समाधान गर्नुपर्छ ।
विचारले जुनसुकै पार्टीप्रति सहानुभूति राखे पनि पत्रकार महासंघको सदस्य हुने र पत्रकारिता गर्ने मान्छे इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ । यो कुरालाई महासंघले सदस्यहरूमा प्रशिक्षित गराउन जरुरी छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो । समग्र नेपाली पत्रकारितालाई कम्तीमा पनि दक्षिण एसिया तहको मापदण्डमा लानुपर्ने आवश्यकता छ ।
हाम्रा सदस्यहरूलाई पत्रकारिताका आधारभूत ज्ञानको अभाव छ । त्यो ज्ञान दिनुप¥यो, सीप विकास गर्नुप¥यो । पत्रकारिताका विभिन्न विधा छन् । विधागत पत्रकारितामा काम गर्ने जनशक्तिलाई पनि त्यो विधानसँग गम्भीर रूपमा परिचित गराउनुपर्छ ।
त्यो भएपछि पत्रकारिताको मापदण्ड बढ्छ । दक्षिण एसियाको तहमा यति वर्षमा लैजाने भन्ने लक्ष्यसहित पत्रकार महासंघले काम गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने भोलि हाम्रो पत्रकारिता विश्वस्तरको पत्रकारितासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको बन्छ ।
त्यसैले ग्रुपबाट चुनाव लड्ने, पार्टीभित्रको गुटको, गुटको पनि नेताको सहानुभूति लिने एक खालको समस्या छ । यो भोलि हट्दै जान्छ । समग्रमा पत्रकार महासंघ स्वच्छ पत्रकारिता गर्ने, पत्रकारितालाई जीवनको लक्ष्य बनाउने जनशक्तिको अभिभावक संस्था बनाउन जरुरी छ ।
सदस्यता शुद्धीकरणको विषयमा जो शुद्धीकरण गर्छु भनेर नेतृत्वमा आएको हुन्छ, जो आफैं दलीय संलग्नतामा आएको हुन्छ, यही कारण सदस्यता शुद्धीकरणमा समस्या देखिन्छ । म कुनै पनि पार्टीनिकटको भ्रातृ संस्थाबाट जितेर अध्यक्ष भएको छु भने आफूनिकटको सदस्यता शुद्ध गर्न सक्दिनँ नि । अर्को विचारको साथी नेतृत्वमा पुगेको छ भने उसले पनि त्यही गर्ने भयो ।
पहिले त आफू शुद्ध हुनुप-यो । म स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारहरूको समर्थनमा नेतृत्वमा आएको छु भने कहीँ न कहीँ कडा रूपमा अनुशासन कायम गर्न सक्छु नि ।
म कुनै पार्टीको नेताको आदेशमा नचल्ने छु भने मैले शुद्धीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न सक्छु । तर, शुद्धीकरण गर्ने तहमा बसेका मानिसहरूले पार्टीको संगठनबाट निर्देशित हुने भएकाले यो एजेन्डा जस्ताको तस्तै रहिरहेको हो । समस्या मूल ठाउँमै छ ।
ट्रेड युनियनको रुपमा विकास गर्नुपर्छ
नेपाल पत्रकार महासंघ निश्चित रूपमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको संगठन बन्नुपर्छ । यसको अवधारणा यही भए पनि अवधारणाअनुसारको महासंघ हामीले बनाउन सकेका छैनौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघको संरचना हेर्ने हो भने अहिले पनि प्रकाशकहरूलाई पनि अटाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैले श्रमजीवी पत्रकारको कुरा गर्दा धेरै विधालाई यसले समेट्ने प्रयास गरेको छ । उद्देश्यचाहिँ कोही पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता लिनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने हो । तर, हामीले यसलाई राम्रो ढंगले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।
आगामी दिनमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको विशुद्ध संगठनका रूपमा पत्रकार महासंघलाई विकास गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा, श्रमजीवीको संगठन भएको नाताले महासंघलाई ट्रेड युनियनमा लानुपर्ने स्थिति पनि छ ।
त्यसबारे पनि हामीले बहस चलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले यसलाई ट्रेड युनियनमा लैजान सकेका छैनौं । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो पहरेदारका रूपमा यसलाई विकास गर्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक पहिचान बनेपछि मात्र सदस्यता दिनुपर्छ
नेपाल पत्रकार महासंघले विशेष गरी दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पत्रकार महासंघको निर्दिष्ट उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको समग्र हित हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा भन्नाले बोल्ने, लेख्ने, आफ्ना विचार राख्दा डराउनु नपर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा श्रमसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ला । पत्रकारको सेवासुविधा, कार्यस्थलको वातावरणलगायतका विषय यसमा पर्छन् ।
मलाई लाग्छ, पत्रकार महासंघले काम गर्ने यिनै विषयमा हो । सदस्यता शुद्धीकरण होइन सदस्यता वितरण पद्धतिमै परिवर्तन गरियो भने मात्र पत्रकार महासंघको शुद्धीकरण हुन सक्छ । कानुन पढेर मात्र वकिल हुन पाइँदैन, त्यसका लागि बार काउन्सिलको परीक्षा पास गरेपछि मात्र अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाइन्छ ।
त्यस्तै मेडिकल, इन्जिनियरहरूको पनि त्यस्तै छ । तर, पत्रकारहरूको त्यस्तो केही नहुँदा पत्रकारको सदस्य को हो, होइन ? भन्ने विवाद रहिरह्यो । मलाई के लाग्छ भने उसको सार्वजनिक पहिचान पत्रकार बनेपछि मात्र पत्रकार महासंघको सदस्यता दिनुपर्छ । पत्रकारका रूपमा सार्वजनिक पहिचान बनेर सदस्यता वितरण गरिएमात्र शुद्धीकरण हुन्छ ।
अहिले सदस्यता शुद्धीकरण भनेर उसै गर्न थालियो भने त्यसले विवाद सिर्जना गर्छ । दलगत र आस्थागत कुरा जोडिएर आउँछन् । त्यसकारण वकिल, इन्जिनियरको जस्तै पत्रकारको सदस्यता दिनका लागि पनि केही व्यवस्था गरिनुपर्छ । पत्रकार महासंघको अब आउने नेतृत्वले समग्रमा यिनै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
पत्रकार पत्रकारिता नेपाल पत्रकार महासंघ २५ औं महाधिवेशन